Latest Channel | Infotainment for you
အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ လဲနှုန်းကတော့ တစ်ဒေါ်လာကို ၁၄၄၇ ကျပ် • ယူရို လဲနှုန်းကတော့ တစ်ယူရို ကို ၁၅၄၀ ကျပ် • စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာ လဲနှုန်းကတော့ ၁၀၂၇ကျပ် • တရုတ် တစ်ယွမ် ကို ၂၀၆.၉၈ ကျပ် • မလေးရှားရင်းဂစ် တစ်ရင်းဂစ် လဲနှုန်းကတော့...
ဧည့်မထဆန် တန်ချိန် ၂၀ဝ ကို ယခုလကုန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရ ………………
အခု တောင်သူလယ်သမားအကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရေးဥပဒေအရ ငါးသိန်းအောက်ရောက်နေတဲ့ စပါးတွေကို တောင်သူလယ်သမားတွေဆီက ဝယ်ယူ နေတာရှိတယ်။ ဧရာဝတီရယ်၊ ပဲခူးရယ်၊ ရန်ကုန် ရယ်ပါ။ ဝယ်ပြီးသားစပါးတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့ ရန်ကုန် နှစ်နေရာမှာ လက်ခံတယ်။ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် ရယ်၊ ရွှေပြည်သာရယ်။ အဲဒီလက်ခံနေတဲ့ဆန်ထဲကမှ တန်ချိန် ၂၀ဝ ကို...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်နေချိန် ထိုင်းနိုင်ငံထဲ တရုတ်ခရီးသွားတွေကို ဘာကြောင့် လာခွင့်ပြုထားတာလဲ ……………….
စိန်ခေါ်သူနဲ့ ထိုးဖို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ……
ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်နဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူပြောများနေတာကတော့ “တို့ဆေး” ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “တို့ဆေး” ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား။ 💉💉 🧪🦠🌡 လူ့အသားအရေချင်း ထိတွေ့ရုံနဲ့ တဖက်လူကို မူးမေ့သတိကင်းမဲ့စေပြီး စေလိုရာခိုင်းနိုင်ပါသလား။ “ဟယ်လိုဆရာဝန်” hellosayarwon.com တည်ထောင်သူနဲ့ ဆရာဝန်စာရေးဆရာ ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်းကို ကျနော်တို့ Latest Channel က “တို့ဆေး”...
YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်ငွေအစုတ်အပြဲများ ………
2019 Novel Coronavirus(2019-nCov)ေကြာင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ ဗဟိုကော်မတီပူးတွဲဥက္ကဌ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး …………..
ငလျင်သည် ကြိုတင်ခန့်မှန်း၍ မရသော ဘေး အန္တရာယ်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ငလျင်ကြောင့် လူမသေဘဲ လူများဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အအုံများ ထိခိုက်မှုကြောင့်သာ လူတို့ ထိခိုက် ပျက်စီးရသည် ဖြစ်ရာ အဆောက်အအုံများအား စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မိသားစုတို့ နေထိုင်ရာ နေရာများတွင် ပြုတ်ကျ နိုင်သော ပရိဘောဂများအား...
ထာဝရနှောင်ကြိုးရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေဟာ အမြို့မြို့အနယ်နယ်က ပရိသတ်များကို တရင်းတနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီး
Now and Ever - ထာဝရနှောင်ကြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ယခုတစ်ပတ်စတင်ရုံတင်ပြသခဲ့ရာ ပါဝင်ရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇဏ်ခီ၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ ဒါရိုက်တာခရစ္စတီးနားခီနဲ့ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေဟာ အမြို့မြို့အနယ်နယ်က ပရိသတ်များကို တရင်းတနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီး အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ ၂ ရက် နေ့လယ်ခင်းမှာလည်း ရန်ကုန်၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ Now and...
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၄ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံပမာဏမှာ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ပိုများလာ‌ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏စာရင်းများအရ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကာတူတွင် ကန်ဒေါ်လာ...
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ လစဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၂နာရီ ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းက သတင်းမီဒီယာကောင်စီရုံးခန်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းကြိုင်က ပဏာမရှင်းလင်းပြောကြားရာမှာ အငြင်းပွားမှုနှင့်တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီကနေ ယခုလအတွင်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့သည့် အမှုကိစ္စတွေ၊ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့သတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကနေ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီတဲ့ Facebook Page, Website တို့မှ...
အာရှ ယူ၁၉ ခြေစစ်ပွဲများ ကွင်းဝင်ကြေး ရိုးရိုးတန်း တစ်ထောင်ကျပ်ဖြင့် အားပေးကြည့်ရှုနိုင်မည်
နည်းပြချုပ် ဦးစိုးမြတ်မင်း တာဝန်ယူကိုင်တွယ်နေတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသား ယူ၁၉ အသင်းသည် လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏအားကစားကွင်းမှာ အာရှ ယူ၁၉ ခြေစစ်ပွဲများ စတင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ရာ အသင်းကြီးများဖြစ်သည့် တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား တို့ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် မြန်မာအသင်းအတွက်...
Novotel Yangon Max Hotel နဲ့ Äsia Art Connect တို့ ပူးပေါင်းပြီး Unique Art အမည်ရှိ ပန်းချီပြပွဲနဲ့ လေလံပွဲကျင်းပသွားမည်
ညီနောင်အသင်းကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အသင်းဝင်များရဲ့ ကုန်သည်စက်မှုလက်မှုအသင်းချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း(မူကြမ်း)အပေါ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရန်ကုန်၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၊ Ball Room မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ဟာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအဆင့်မှ တတိယအဆင့်သို့ လျော့ကျသွား ……..
‌J Lo လို့ ပရိသတ်က ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်
“Friend …. သူငယ်ချင်း” CD တေးအယ်လ်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
“ချိုးရုပ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စတင်ရုံတင်ပြသ
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် အတွက် ငွေဈေး ၊ ရွှေဈေး ၊ စက်သုံးဆီဈေး ငွေဈေး ………
ထိုင်းတွင် စက်ရုံ ၂၀၀ ကျော်ပိတ်သိမ်းလိုက်သဖြင့် အလုပ်သမားပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် …….